China GS Nyoro & Yakadzika Kutonhora P YOKUSHURE Firimu fekitori uye vagadziri | GS PACK
GS Soft & Low Temperature Polyolefin Shrink Firimu ndeimwe yemhando yepamusoro yekuita shrink mafirimu.Iine zvese zvakanaka zvivakwa zveP yedu yeP standard shrink firimu, Zvichakadaro ine yakaderera shrink simba, yakaderera shrink temperture uye yakanakisa shrinkage uye zvimwe zvivakwa. Saka inogona kurongedza zvakapfava zvinhu, isinganzwisisike chimiro uye kupisa inzwa Zvinhu. Iyo Yakakwana & yakakwira yekuita shrinkage tembiricha ingangofanana nePV shrink mafirimu.
GS Soft & Low Temperature Polyolefin Shrink Firimu ndeimwe yemhando yepamusoro yekuita shrink mafirimu.Iine zvese zvakanaka zvivakwa zveP yedu yeP standard shrink firimu, Zvichakadaro ine yakaderera shrink simba, yakaderera shrink temperture uye yakanakisa shrinkage uye zvimwe zvivakwa. Saka inogona kurongedza zvinhu zvakapfava, chimiro chisina kujairika uye zvinopisa zvinhu zvinodziya. Iyo Yakakwana & yakakwira kuita shrinkage tembiricha ingangofanana nePV shrink mafirimu. Yayo yakasarudzika shrinkage performance iri pasi pe120 ℃. Nesimba rinokurumidza kudzora simba uye rakasimba chisimbiso simba uye yakasimba misodzi kuramba. Munguva yekupakata, iyo shrinkage inogona kusvika inopfuura 70% .Mushure mekurongedza, zvakare ine yakatanhamara inopisa muromo uye inopindirana static yekuisa chisimbiso zvivakwa. Yedu yakapfava firimu inoona iko kurongedza kugadzikana uye kunovimbisa kupakata kuita kwakanyanya kunaka. Yedu yakapfava firimu inoenderana nemhando dzese dzekudzora kurongedza michina ine yakanakisa kuita. Kunyanya pane iyo inomhanya-mhanya Auto-matic shrink kurongedza michina.
GS Nyoro & Kuderera Kupisa Polyolefin Shrink Firimu
Ukobvu Micron ASTM-D 374 15um 19um 25um
Kuwandisa g / cm3 ASTM-D 1505 0.91 0.91 0.91
Tensile Simba MD N / mm2 ASTM-D 882 95 95 95
Musodzi Kuramba MD N ASTM-D 1938 0.87 1.1 1.2
Chisimbiso Simba N / 15mm Q BT 23-58 12 14 16
Mukati Dhayamita Inch 3 3 3
Hurukuro: MD (Muchina wedhisheni), TD (Trany erse nzira)
POF kupisa inodzikira firimu
POF rudzi rwekupisa hunodzikira firimu, inonyanya kushandiswa kuputira zvigadzirwa zvine zvakajairwa uye zvisina kujairika maumbirwo. Nekuda kwekuchengetedzwa kwayo kusiri-chepfu uye kwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kujekesa kwakakwirira, kupisa kwakanaka-kusagadzikana, kubwinya kukuru, kuomarara, kuramba misodzi, Ine hunhu hweyunifomu yekupisa kupisa uye inokodzera otomatiki-ekumhanyisa kurongedza. Icho chigadzirwa chinotsiva chetsika PVC kupisa inodzikira firimu. Inoshandiswa zvakanyanya mukushandisa zvemotokari, zvigadzirwa zvepurasitiki, zvinyorwa, mabhuku, zvemagetsi, mabhodhi edunhu, MP3, VCD, zvigadzirwa zvemaoko, mapikicha emifananidzo uye zvimwe zvigadzirwa zvehuni, Matoyi, mishonga yekuuraya zvipuka, zvinodikanwa zvezuva nezuva, chikafu, zvigadzirwa, zvinwiwa zvemumagaba, zvigadzirwa zvemukaka, mishonga, makaseti uye matepi evhidhiyo nezvimwe zvigadzirwa.
1. Kujekesa kwepamusoro uye kubwinya kwakanaka, uko kunogona kuratidza zvakajeka kuoneka kwechigadzirwa, kunatsiridza pfungwa yekuona, uye kuratidza kumusoro-kumagumo.
2. Iyo shrinkage rate yakakura, inosvika ku75%, uye iyo shanduko yakanaka. Inogona kurongedza chero chimiro chezvinhu. Uye iyo shrinkage simba rematatu-maseru co-extruded firimu inorapwa neakasarudzika maitiro anotaridzika, ayo anogona kusangana neiyo shrinkage simba rezvakasiyana zvigadzirwa kurongedza. Kumbira.
3. Welding mashandiro akanaka uye yakasimba simba, inokodzera manyore, semi-otomatiki uye yakakwira-inomhanya otomatiki kurongedza.
4. Iyo ine yakanaka kutonhora kuramba uye inogona kuchengetedza inochinja pa -50 ° C isina embrittlement. Iyo yakakodzera yekuchengetedza uye kutakura kweakarongedzwa zvinhu munzvimbo inotonhora nharaunda.
5. Zvakatipoteredza zvine hushamwari, zvisina chepfu, zvinoenderana neUS FDA uye USDA zviyero, uye zvinogona kurongedza chikafu. Huru mbichana zvigadzirwa zvematatu-maseru co-extruded kupisa shrinkable kuputira firimu inosanganisira LLDPE (mutsara yakaderera-density polyethylene), TPP (ternary copolymer polypropylene), PPC (binary copolymer polypropylene) uye anodiwa anoshanda anowedzera seShuang Slip mumiriri, anti -vharidzira mumiririri, antistatic mumiriri, nezvimwewo. Izvi zvigadzirwa zvakasvibirira zvine hushamwari uye zvisina-chepfu zvinhu, hapana gasi ine chepfu kana hwema huchagadzirwa panguva yekugadzirisa uye kugadzirwa kwechigadzirwa, uye hutsanana hwechigadzirwa hunosangana neUS FDA uye USDA zviyero, uye zvinogona kushandiswa kurongedza chikafu.
Kugadzira maitiro gadziriso Matatu-masenduru co-extrusion kupisa anodzora ekuputira firimu inogadzirwa nemitsetse yakaderera density polyethylene (LLDPE) uye copolymer polypropylene (TPP, PPC) seyakanyanya kugadzirwa zvinhu, ichiwedzera zvinowedzerwa zvakafanira, uye zvinogadziriswa neco-extrusion furidza kuumbwa. Maitiro acho akasiyana neyakajairwa ekuumba maitiro. Nekuda kweiyo yakasarudzika tensile zvivakwa zvePP yakanyungudika mamiriro, echinyakare furidza kuumba maitiro haigone kushandiswa. Panzvimbo iyoyo, iyo nzira mbiri ye bubble inoshandiswa, iyo inozivikanwa zvakare sePulandi maitiro munyika. Iyo inonyungudika uye kudhonzwa neakasiyana extruders, kuburikidza neyakagadzirirwa yakagadzirirwa co-extrusion kufa musoro, iyo yekutanga firimu inoumbwa uye nekudzimwa, uyezve inopisa nekuda kwechipiri inflation uye kutambanudza kuwana chigadzirwa.
Main performance editing chigadzirwa magadzirirwo
Nhatu-rukoko co-extruded kupisa shrinkable firimu inogona kugadzirwa mune akasiyana magadzirirwo maererano nechishandiso. Iyo yakazara ukobvu inotangira kubva pa12μm kusvika pa30μm. Zvakajairwa ukobvu ndeye 12μm, 15μm, 19μm, 25μm, nezvimwewo. Hupamhi hwesarudzo hunotsamira pahuwandu hwepakeji. Kutonhora kutonhora Iwo matatu-masiraji akabatanidza kupisa-anodzora ekuputira firimu inoramba yakapfava pa -50 ° C, isina brittleness, uye inokodzera kuchengetwa uye kutakurwa kweakarongedzwa acho munzvimbo inotonhora. Hutsanana mashandiro Iyo mbishi zvinhu zvinoshandiswa mumatatu-masenduru co-extruded kupisa anodzikira ekuputira firimu zvinhu zvese zvine nharaunda zvisina hunyanzvi zvinhu, uye iyo yekugadzirisa uye yekushandisa maitiro ndeyehutsanana uye isiri-chepfu, kutevedzera nyika yenyika FDA uye USDA zviyero, uye zvinogona kushandiswa kupaka chikafu.
Yekushandisa tarisiro yekugadzirisa
POF kupisa inodziya yekuvhara firimu ine akasiyana mashandisiro, musika wakakura, uye ine zvakanakira kuchengetedza kwezvakatipoteredza uye isiri-chepfu. Naizvozvo, yakagamuchira kutarisisa kwakakura kubva kunyika dzakabudirira mupasi uye yakatsiva pvc kupisa kwekuputira firimu seyakajairika chigadzirwa chemidziyo yekupisa inodzikira. Kugadzirwa kweiyi nhepfenyuro yezvigadzirwa munyika yangu kwakatanga pakati-ma1990. Parizvino, pane mitsara inodarika gumi yekugadzira muChina, zvese zviri zvigadzirwa zvekunze, zvine huwandu hwekugadzira huwandu hunosvika zviuru makumi maviri zvematani. Nekuda kweimwe gaka pakati penyika yangu yekutakura tekinoroji uye nyika dzakasimukira pasi rese, kushandiswa kwematatu-maseru co-extrusion akateedzana ekupisa-anodzika ekuputira mafirimu muChina achiri padanho rekutanga, uye chiyero chekushandisa chichiri chakamanikana, inogumira pazvinwiwa, zvigadzirwa zvekuteerera-zvinoonekwa, zvekudya zviri nyore uye zvishoma zvigadzirwa zvemakemikari zvezuva nezuva Munzvimbo shoma, chinodikanwa chegore rinenge matani maviri kusvika zviuru makumi mashanu kusvika makumi matatu.
Zvimiro zvekupisa zvinopisa firimu
Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa pakupisa zvinopisa mafirimu anonyanya akasiyana mafirmoplastic mafirimu. Pakutanga, PVC shrink firimu yainyanyo shandiswa. Nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwemusika kudikanwa, PVC shrink firimu zvishoma nezvishoma yakaderera, uye dzakasiyana PE, PP, PET, PVDC, POF uye nezvimwe multilayer co-extruded kupisa shrink mafirimu akagadzirwa nekukurumidza uye akazova akakosha emusika. Kupisa shrinkable firimu inoshandiswa mukutengesa uye kutakura zvigadzirwa zvakasiyana, uye basa rayo guru nderekudzikamisa, kuvhara uye kuchengetedza chigadzirwa. Iyo yekuderera firimu inofanirwa kuve neakakwira puncture kuramba, yakanaka shrinkage uye imwe shrinkage kushushikana. Munguva yekudzikira maitiro, iyo firimu haigone kuburitsa maburi. Sezvo shrink firimu inowanzo shandiswa kunze, zvinodikanwa kuwedzera UV anti-ultraviolet mumiriri.
Iyo ine yakachinjika yakachinjika, isiri nyore kupaza, yakasimba blast kuramba, yakasimba kukanganisa kuramba, yakasimba misodzi kuramba, yakasimba tensile simba, uye inogona kutsiva bhokisi kurongedza. Iyo shrinkage rate yakakura, uye zvinhu zvacho zvinogona kuvharwa zvakasimba mushure mekudziya kwekupisa. Kana iyo PE ichipfuura-kuburikidza nehombodo (kuvhura kumagumo maviri ebhegi) iko kupisa-kwakadzikira, iwo maviri magumo ekuvhura anogona kusimudza zvinhu, izvo zvinogona kutakura huremu hwe15KG kuitira nyore kubata. Iyo ine yakajeka kujekesa uye 80% mwenje kutumira. Inogona kuratidza zvigadzirwa uye kukurudzira zvigadzirwa zvisingaonekwe. Panguva imwecheteyo, zvakare inoderedza zvikanganiso zvekugovera mu link logistics. Hunyoro-humbowo, husina mvura uye guruva-chiratidzo, haigone chete kuzadzisa iko kurongedza maitiro, asi zvakare yakanaka uye inochengetedza chigadzirwa. Isina-chepfu, isina kunaka, uye yakasviba- isina zvigadzirwa zvehukama zvinehukama.
Pe kupisa kupisa shrinkable firimu kunyorera chiyero: mishonga, zvinwiwa, mamineral mvura, doro, laminate flooring, palletizing, zvekuvakisa, simbi zvigadzirwa, zvemukaka zvigadzirwa, girazi mabhodhoro, maindasitiri bepa uye nezvimwe zvakakura-zviyero zvekutakura michina, zvinyorwa, nezvimwe
Juyin Plastic Packaging Zvigadzirwa (Shenzhen) Co, Ltd.iri inyanzvi yekupakata mutengesi inosanganisa R&D, kugadzira, kutengesa uye sevhisi. Zvigadzirwa zvacho zvinosanganisira zvakapakata zvekutakura zvinhu, kurongedza zvishandiso uye maturusi, uye kurongedza otomatiki kudzora tambo. Isu tine timu yehunyanzvi yakatsaurirwa kutsvagisa nekusimudzira kwezvakatipoteredza zvine hunyanzvi zvekutakura uye zvigadzirwa zvekurongedza. Iyo ine yepamhepo nyanzvi kurongedza chigadzirwa michina yekuchengetedza dhipatimendi muChina, ichipa 24-awa pa-saiti kubvunza masevhisi.
Pashure: GS Standard Polyolefin Shrink Firimu
Zvadaro: GS Hot Slip Polyolefin Shrink Firimu
Yepasi Kupisa Mafirimu
Polyolefin Shrink Firimu Kupisa
Polyolefin Shrink Kuputira Tembiricha
Shrink Kuputira Firimu Kupisa
Polyolefin Shrink Kuputira Tembiricha, Polyolefin Pof Shrink Kuputira, Shrink Firimu Pvc, Polyolefin Pof Shrink Firimu, Tambanudza Firimu Vs Shrink Kuputira, Shrink Kuputira Firimu Rolls,